Tsvaga Yakagadziriswa IT masevhisi Aunogona Kutsamira Pairi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Mabhizinesi ari kusimukira pasi rese. Nekuchinja tekinoroji, mamwe makambani anogona kufambirana nepo mamwe achinonoka. Pane nzira mbiri dzekushanda mu a bhizimisi nharaunda: kutanga, kuomerera kune echinyakare maturusi uye akajairwa mashandiro maitiro. Chechipiri ndechekuramba uchichinja nenharaunda ine simba nekutora matekinoroji matsva nemaitiro emazuva ano.
Inotarisirwa IT masevhisi ndeimwe yenzira nyowani dzinoshandiswa nemakambani pasirese kurarama mumisika. Usati wasimudza chero kambani ine chiratidzo, zvinodikanwa kuti utsvage akakwanisa IT services Toronto kuve nechokwadi chekuchengetedzeka uye dhatabhesi, shanduko yedhijitari, gore-based mhinduro, uye manejimendi manejimendi manejimendi.
Anotevera ndiwo anovimbika uye akavimbika anochengetedzwa IT masevhisi anozobatsira yako bhizimisi kukura uye kubudirira:
Big data data ruzivo
Mumamiriro ezvinhu azvino, pane kudiwa kwekukurumidzira kwekuchengetedza data uye masevhisi ekudzivirira. Iyo dhatabhesi chinhu chakakosha pane chero bhizimisi sangano. Mazhinji makambani anobata dhatabhesi yavo uye ruzivo sechinhu. Nokudaro, ichachengetedzwa zvachose.
Sezvo kugona kwemabhizimusi kuchikura, iyo data ichawedzerawo nekuti ruzivo rutsva rwevatengi, vatengi, vanotengesa, uye vanobatana havazombomira kuuya.
Mazhinji mabhizinesi ane dashboard yekuisa pakati uye kuronga iyo data kuti riwedzere kushandiswa, asi izvo hazvina kukwana.
Kuzivisa kwakakodzera uye kuongororwa kweese data kunodiwa nguva nenguva kuti uchengetedze ruzivo.
fanira big data masevhisi ehungwaru anovimbisa kuti data rinounzwa nenzira kwayo uye rinochengetwa munzvimbo dzakachengetedzwa.
Izvo zvinobatsirawo mukugadzira yakadzama ongororo yeruzivo rwese, kudzikisira iro reruoko basa, uye kubatsira mukugadzirwa.
Data kuchengetedza masevhisi
Mazhinji midziyo mukambani inogona kudhura, asi hapana chinhu chakakosha uye chakakosha kupfuura data. Hupfumi pasi rese hwuri kumhanya nekuda kwekuunganidzwa kwedata uye kufambiswa. Zviito zvisiri pamutemo uye zvakashata senge phishing uye cyber kurwisa zviri kuwedzera zuva nezuva. Vanonanga mabhizinesi madiki zvakanyanya nekuti maumbirwo avo ekubatana haana kusimba uye haana kuchengetedzeka.
Naizvozvo, data uye masevhisi ekuchengetedza masevhisi anogona kuvimbisa kuti kutyora kwekutyora kunochengetwa pasi pesimba. Maitiro akasiyana siyana senge encryption mhinduro, dhizaini kunyorera, multifactor kuzivikanwa, uye mamwe maitiro anogona kuchengetedza iyo data.
Nhasi, makambani mazhinji akatanga kushandisa muchinjikwa-chikuva chengetedzo masevhisi kuchengetedza ese maratidziro nekubatana.
Digitization rubatsiro uye shanduko
Digitization rubatsiro rubatsiro rwuri kuve rwakakurumbira pakati pemabhizinesi ese. Vazhinji vatengi vanosarudza zvakapusa de la, izvo zvinosanganisira chero pasina kuchinjaniswa kwemapepa mapepa.
Tichifunga nezve chirevo chevatengi, zvinobatsira kumakambani kuwana IT masevhisi kuti vawane magwaro avo uye mapepa akaverengerwa.
Izvi zvinopa mukureruka kwekufamba kwebasa uye nyore kuwana kune vashandi. Kana vashandi vachifanira kubata nemapepa mashoma, pane mikana irinani yekuwedzera kushanda pamwe nekugadzirwa.
Inoputsa yapfuura bhizimisi zvivakwa, zvichigadzira nzira yekuti zviwanikwa zviri nani uye masevhisi aitike mumakambani.
Shanduko yedhijitari chinodikanwa chinokurumidza cheawa. Hapana munhu anonamatira kune avo akajairwa matekiniki uye kutarisira kukwidziridzwa kwezvivakwa.
Cloud-based mhinduro uye zvigadzirwa
Kubva pakauya makore-based matekinoroji, yakavhiringidza nzira iyo vanhu vaishandisa kuchengeta dhata neruzivo. Cloud masisitimu ndizvo zvikonzero zvekuparadza dzimba dzakasiyana dzakazara nemapepa, zvinyorwa, uye magwaro. Iyo yakashandura nzira iyo mabhizinesi anotarisa iko kuchengetwa kweruzivo.
Iyo inzira yakabatana uye inoenderana yekubata neruzivo nekuvaka zvivakwa zvinoshandira vese vashandi. Iwe unogona kuchengeta ruzivo mune chimwe chikamu chenyika, uye icho chinogona kutariswa mune chimwe chikamu chepasi nekungodzvanya kamwe chete.
Cloud mhinduro zvakaita kuti zvigadziriswe zvakagadziriswa zvebhizinesi, zvichitungamira mukusimudzira kushanda pamwe nekubudirira kwemitengo.
Inojekesa masisitimu ese eruzivo pane imwe nzvimbo yepakati, uye ruzivo runogona kutariswa nemunhu wese anowana kwariri. Izvo zvinobatsirawo mukupa imwe yekuwedzera dziviriro uye chengetedzo kumabhizinesi madiki.
Kwevatengi sevhisi otomatiki nzira
Kune chero bhizimisi, ingave iri nyowani kana ruzivo, vatengi ndivo vanonyanya kukosha. Naizvozvo, masevhisi evatengi anofanirwa kuvandudzwa nemasevhisi eIT anotungamirwa. Kambani yega yega inopinzwa mune imwe nzira yeCSR asi inotungamirwa masevhisi anoita kuti zvive nyore kumakambani kuwana kuvimba kwevatengi vavo.
Kushandisa maAI uye chatbots rave shanduko kumakambani nekuti inodhura-inoshanda uye inochengetedza nguva. kushandisa michina masevhisi anoona kuti mibvunzo yese ine chekuita nevatengi inogadziriswa nekukurumidza zvakanyanya, uye zvichemo zvese zvinogadziriswa nekusabatira vashoma.
Technologies inogona kuputsa chero nguva, kunyanya kupihwa mashandisiro avanogara vachiitwa uye vanovimbwa nawo. Mahofisi anotarisirwa anouyawo nenzira yemasevhisi ekutsigira, ayo ari nyore mhinduro dzekukurumidza dzezvinetso zveIT.
Zvinogona kuitika kuti vashandi vanogona kusangana nematambudziko eIT pavanenge vari pakati pebasa ravo. Masevhisi ekutsigira, echokwadi kuzita ravo, anogona kupa tsigiro yekukurumidza mumamiriro ezvinhu akadaro. Zvakare, aya masevhisi ekutsigira anouya mumatanho akasiyana- kubva kubatsira nematambudziko madiki edesktop kupa rubatsiro nehardware uye Software matambudziko. Mushandi wega akatarisana nedambudziko anogona kubata masevhisi erutsigiro owana rubatsiro nekukurumidza.
Chinangwa chikuru chevanopa masevhisi erutsigiro ndechekuona kuti sisitimu yemutengi yakamira uye inoshanda zvakanaka, pasina nyaya dzekuenderana. Ivo zvakare vane basa rekutsanangura masisitimu uye maitiro kune vashandi kuti vanzwisise pfungwa yenyaya uye vagone kushandisa Software kana hardware zvakanaka.
Managed masevhisi anga ari akakurumbira bhizimisi chishandiso kwemakore ikozvino. Vanorerutsa mutoro wekambani nekupa vashandi vane hunyanzvi kuti vabate mamwe masekete uku vachichengeta mari yakanaka yekambani. Sezvawakaverenga, kune dzakawanda vakakwanisa IT services iyo kambani inofanirwa kuvimba nayo kuitira kuti iyo kambani pachayo igone kutarisa pazvimwe zvinhu zvekutanga sekushandira mukuwedzera kwekambani zvichingodaro.
Fortinet Kuchengeteka Webinar: Tarisa Izvozvi Pa-Kudiwa